Hoogganaan mootummaa naannoo Tigiraay, Dr. Debre-tsiyoon G/Mikaa’el, har’a maddeen oduu naannichaaf ibsa kennaniin, Tigiraay irratti deddeebi’ee shirri xaxamuun akka miidhaa geessisaa jiru dubbatan. Keessumaa filannoon naannoo eega geggeessamee as, dhiibbaa gama miidiyaa fi dinagdeen raaw’atuu ala, gara tarkaanfii humnaatti cehaa jira, jechuun ibsan. Kanaaf jecha “uummatni naannichaa qophii isaa cimsatee itti fufa,” jedhan – Dr. Debre-tsiyoon.
Nuti ka jechaa jirru, “adda addummaan keenya ka siyaasaa waan taheef karaa siyaasaa wal haa falminu,” ka jedhu. Sababaa kanaan waggaa lamaa ol obsaan eegnee jirra, jechuudhaan kan ibsan – hoogganaan mootummaa naannoo Tigiraay kun, “humnaan kan hiikamu yoo tahe rakkoon hin jiru. Waraana dhiisaa hin jennu. Akka barbaachisaa hin ta’iin garuu dubbataa jirra. Yoo dhufes of irraa agganna,” jedhan.
Itti fuudhaanis, “ammas adda addummaa jiru hiikuuf hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman. Waltajjiin hunda hirmaachise haa qopheessamu. Furmaanni isaa kana. Waltajjii qopheessanii waliin dubbachuu dha. Waraansa hambisnee waliin haa dubbannu,” jedhan.
Waraansa hambisuuf jecha, humna isaanii cimsachuun akka qophaawanis dubbatan.
Mootummaa fi paartiin isaanii haalawwan yeroo ammaa jiran gamaaggamuu isaa ka dubbatan – Dr. Debre-tsioyoon G/Mikaa’el, “uummata irra miidhaa geessisuuf humna alaa wajjiin wal-gargaaruudhaan ahojjetamaa jira,” jedhanii, mootummaan Ertiraa, mootummaa Federaalaa Itiyoophiyaa wajjiin walgargaaruudhaan uummata Tigiraay haleeluuf akka qophaa’aa jiranitti ibsan.
”Mootummaan Ertiraa, humnoota bilisummaa Ertiraa hin deggerre wajjiin waliitumsuun uummata Tigiraay, kan bilisummaa Ertiraaf qabsaa’e haleeluuf kan hojjetaa jiru tahuu uummatni Ertiraa fi Raayyaan waraanaa Ertiraa hubachuu qaba,” jedhan – Dr. Debre-tsiyoon. Gabaasaa guutuu caqasaa.